ပွိုငျဘမော်တော်ဆိုင်ကယ် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34590)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10880)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9841)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9471)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (8949)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7945)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7202)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7122)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (6994)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6485)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6138)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5654)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5350)
Home → စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော → Matchless Motorcycles
20 ဇွန် 2015 | Author: dima | Comments Off on ပွိုငျဘမော်တော်ဆိုင်ကယ်
The Collier brothers built their first machine in 1899, က 1907 အဆိုပါကျွန်းက Man TT ၏လူမျိုးမှာအနိုင်ရခဲ့သည်. တစ်စက္ကန့်ရာအရပျကအောက်ပါ 1908, သူတို့နောက်တဖန်အနိုင်ရ 1909 နှင့် 1910. ပထမကမ္ဘာစစ်ထုတ်လုပ်မှု JAP နှင့် MAG နှစ်ဦးစလုံးထံမှအင်ဂျင်ကိုသုံးပြီးပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် .
ငါ့နာမကို JT Davis ကဖြစ်ပါတယ်, ငါဥဩမီဒီယာမှာတွဲဘက်ထုတ်လုပ်သူပေါ့ကျနော်တို့ငါးမိုင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါလီမန်အဆောက်အထံမှတည်ရှိသည်. ကျနော်တို့သူကိုပြုပြင်ရေးနှင့်ပြုပြင်စပျစ်သီးကိုဆိုင်ကယ်စက်ပြင် ပတ်သက်. Discovery Channel ကိုအသစ်တစ်ခုစီးရီးကိုထုတ်လုပ်ကြသည်. ကျနော်တို့ခြောက်လ feature (6) သုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီးရီးကျော်စက်ဘီး, တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်လမ်းတွဲငါတို့သည်အချို့သောတကယ်တော့စစ်ဆေးခြင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်သောမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝေမျှဖို့စီစဉ်.
ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 1931 တစ်ဦး Brough Superior ဆိုက်ကားနှင့်အတူပွိုငျဘမော်ဒယ် X ကို. ငါဆိုင်ကယ်နှင့်ပွနျလညျထူထောငျဓာတ်ပုံများမီနှင့်အပြီးပူးတွဲင့်.
သင်ဤစက်ဘီးကြိုတင် / post ကိုပွနျလညျထူထောငျလေ့လာပြီးနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အဆက်အသွယ်၌ငါ့ကိုထားနိုင်သလား? ကစက်ဘီးပကတိဖြစ်လေ၏ဘယ်လိုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိခြင်းမရှိဘဲအမှန်တကယ်တန်ဖိုးအားပေးဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မည်ငါနားလည်, အဘယ်အရာကိုထုတ်ကုန်အသက်ပြန်ရှင်ဖို့ကဆောင်ကြဉ်းရန်အသုံးပြုခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်. သို့သျောလညျး, တစ်ဦးအမြင်အာရုံအကဲဖြတ်အတူ ballpark ပုံ Discovery Channel ကိုကြည့်ရှုသူမှတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးကူညီနိုင်.
Try the page on serial numbers for clues on the model, ပြီးနောက် 1956 gallery hasapage of specs for that one.
Other articles of the category "စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော":
20.06.2015 | Comments Off on Blata mini ကို Moto
1939 အိန္ဒိယ Scout ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်အမေရိကန် M က ...
20.06.2015 | Comments Off on 1939 အိန္ဒိယ Scout ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်အမေရိကန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
20.06.2015 | Comments Off on Jaguar ကိုကား
1939 AJS 500 V4 ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်ဗြိတိန် Moto ...
19.06.2015 | Comments Off on 1939 AJS 500 V4 ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်ဗြိတိန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
သုညမော်တော်ဆိုင်ကယ်အားလုံး-နယူးကမ်းလှမ်း 2010 သုည DS နှင့် Z ...
19.06.2015 | Comments Off on သုညမော်တော်ဆိုင်ကယ်အားလုံး-နယူးကမ်းလှမ်း 2010 အောက်မှာ $ 7500 ဘို့သုည DS နှင့်သုည S က…
Harley Davidson အမဲဆီဎဓာတ်ဆီ
19.06.2015 | Comments Off on Harley Davidson အမဲဆီဎဓာတ်ဆီ
Brammo Enertia လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် - Best Buy မှာ?
19.06.2015 | Comments Off on Brammo Enertia လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် - Best Buy မှာ?
ဆူဇူကီး AN 650 Brammo Enertia ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဆူဇူကီး Colleda CO သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix စက်ဘီး Kawasaki ER-6n အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati Diavel Ducati Desmosedici GP11 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati 60 Bajaj Discover ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Aprilia Mana 850 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဟွန်ဒါ DN-01 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Moto Guzzi 1000 Daytona Injection တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စမတ် eScooter